Xilligu waa Xagaa. Waa waqtiga ruuxa nasiinada u baahani uu nafta latacaalo oo madaddaaliyo. Wuxuu shakhsigu inta badan, waa qofkii awooda'e, gaar ahaan dadka ku dhaqan waddammada horumaray, iskuddayaa in uu daalka iyo shaqadii badnayd ee sannadka ka carraggeddisto, ka fasax-qaato oo ka dhoofo ama ka socdaalo halkii uu markaa degganaa oo ka shaqeeynayay. Waxay dadku qaar ka helaan in ay tagaan meel xeeb, cadceed iyo cimilo kulul leh. Kuwana waxay jecelyihiin kob jaanta iyo jabaqu ku yaryahay, aan qaac, qiic iyo ur naftu kahato lahayn, dhul dabeeci ah oo aanu cagtu ku badnayn.
Raabbi Rooraaye iyo Rati Riitanen waa arday dhigata Jaamacadda London, gaar ahaan Dugsiga Daraasadaha Bariga iyo Afrikada, marka la soo gaabiyana loo yaqaan [SOAS]. Waa reer xaas ah oo is-qaba, oori iyo saygeed. Waxay soo xidheen sannad dugsiyeedkoodii saddexaad ee kulliyadda afafka iyo dhaqanka. Jimce, 29kii Juun 2007dii, fasixii kulaylaha ayay London Paddington Station tareen ka wada raaceen oo u xagaabbaxeen tuuladoodii Gotherington. Waxaa halkaas ku sugan oo si joogto ah u deggan inantooda curadda ah, Ruun Rooraaye, toddoba sano jir weeye, ayeeydeeda iyo awowgeeda xagga hooyo, Ruth iyo Ronald Riitanen, la nool.
Waqtiga fasaxa jaamacadda lagu jiro, wuxuu Raabbi Rooraaye kolkii hore qorshihiisu ahaa in Soomaaliya, gaar ahaan degmada Galdogob, u socdaalo si uu aabbihii Dirir Rooraaye iyo hooyadii Ilroon Dhiirrane u booqdo dabadeedna u soo caanaysto. Waalidkiisii baa kula taliyey in uu doorkan imaatinkiisa ka baaqdo, waayo abaar iyo oomasoore baa dalkii ka jirey. Waxaa loo sheegey in uu yimaado xilli dhulku barwaaqo yahay oo biyo iyo baadba leeyahay. Kuddarsoo, waxaa intaa loo sii raaciyey in dadka Soomaalida ah ee BM ku nool ay dalkoodii hooyo u soo roobdoonaan oo Eebbe u baryaan in uu oommanaha ka qaado. Raabbi waa uu addeecay dardaarankii labadii dhalay, fariintii la farayna xayn rag iyo dumar isugu jirey buu u gudbiyey. Waxaa lagu ballamay in muddo dhowr toddobaad gudahood ah, habeen habeennada ka mid ah rug laysugu yimaaddo oo halkaas lagu roobdoono; in farriinta la wada gaadhsiiyo dhammaan Soomaalida BM deggan. Dabadeed, reerkiisii in uu xagaaga iskala joogo ayuu go’aansaday.
Isla maalintaa fiidkeedii, ayay Rati iyo Raabbi tuuladoodii u hoydeen. Isla aroortii xigtay, hawshii beerta iyo reerka bay billaabeen in ay dhankooda ka qaybqaataan. Waalidkood ayaa u tiltilmaamay halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo shaqada qaybta iyaga kaga aaddan xilliga tuulada ay joogaan.
Ruth iyo Ronald Riitanen waxay Gotherington ku leeyihiin dhul beeraad laba hektaar ku fadhiya. Halkaa, waxaa uga go'a dalagga beeraha, waxay ku dhaqdaan xoolo badan oo kala nooc-nooc ah. Ruth baa dhulka aabbaheed iyo hooyadeed, Peter iyo Rosemary Ransom, oo wax carruur ah keligeed ka lahaa ka dhaxashay. Tobankii sannadood ee u dambeeyey, waxaa agaasinka beerta gacanta ku hayay Ruth iyo saygeeda, Ronald, oo asal iyo abtirsiinyo ka soo jeeda Hanko, Finlaandiya.